ကြှနျတျောကလညျး မွောငျ..မွောငျ..မွောငျ ပါပဲလို့ပွောလာတဲ့ သရုပျဆောငျ ဝဠေုကြျော - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/ကြှနျတျောကလညျး မွောငျ..မွောငျ..မွောငျ ပါပဲလို့ပွောလာတဲ့ သရုပျဆောငျ ဝဠေုကြျော
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ “အမျိုးသမီးရေးရာ အငြိမ့်” မှာ သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်က လူရွှင်တော် အဖြစ် ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဝေဠုကျော်က အခု ခေတ်စားနေတဲ့ မြောင်..မြောင်…မြောင် သီချင်းလေးနဲ့ကပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးကပြဖျော်ဖြေရတဲ့ အပေါ် ဝေဠုကျော်ရဲ့ ခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ –“ခံစားချက်က ဘယ်လိုပြောရမလဲရှက်တယ်။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်က အခြောက်နေရာက လုပ်ရတဲ့ အခါဆိုတော့ ဒါလေး ထည့်လုပ်ဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်လိုက်တာပါ။
အနုပညာကကျရာ တာဝန်ထမ်းရမှာပဲလေ။ ဒါလေးက လည်း ခေတ်စားနေတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မိန်းကလေး တော်တော်များများကလည်း လုပ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်က မင်းသမီးတွေလည်းလုပ်ကြတယ်။ မင်းသားထဲကတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲထင်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မြောင်. .. မြောင်.. မြောင် ပါပဲလို့ ။” ဆိုပါတယ်။
ပရဟိတမင်းသားကြီးလည်းဖြစ် ပြည့်သူအချစ်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ ကိုဝေဠုကျော်က မြောင်… မြောင်… မြောင် ပါတဲ့ ။ ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးကရော…. မြောင်..မြောင်..မြောင် ပဲလား။
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသမီးရေးရာ အဖှဲ့ခြုပျရဲ့ (၁၅) ကွိမျမွောကျစီစဉျတငျဆကျတဲ့ “အမြိုးသမီးရေးရာ အငွိမျ့” မှာ သရုပျဆောငျ ဝဠေုကြျောက လူရှငျတျော အဖွဈ ပါဝငျဖြျောဖွခေဲ့ပါတယျ။ ကိုဝဠေုကြျောက အခု ခတျေစားနတေဲ့ မွောငျ..မွောငျ…မွောငျ သီခငျြးလေးနဲ့ကပွီး ခဈြဖို့ကောငျးအောငျဖြျောဖွခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးကပွဖြျောဖွရေတဲ့ အပျေါ ဝဠေုကြျောရဲ့ ခံစားခကျြကဘယျလိုရှိလဲဆိုတော့ –“ခံစားခကျြက ဘယျလိုပွောရမလဲရှကျတယျ။ ဘာရယျ မဟုတျပါဘူး ကြှနျတျောက အခွောကျနရောက လုပျရတဲ့ အခါဆိုတော့ ဒါလေး ထညျ့လုပျဖွဈရငျ ကောငျးမယျထငျလို့လုပျလိုကျတာပါ။
အနုပညာကကရြာ တာဝနျထမျးရမှာပဲလေ။ ဒါလေးက လညျး ခတျေစားနတေယျ။ ကမ်ဘာအရပျရပျက မိနျးကလေး တျောတျောမြားမြားကလညျး လုပျကွတယျ။ မွနျမာပွညျက မငျးသမီးတှလေညျးလုပျကွတယျ။ မငျးသားထဲကတော့ ကြှနျတျောတဈယောကျပဲထငျတယျ။ ကြှနျတျောကလညျး မွောငျ. .. မွောငျ.. မွောငျ ပါပဲလို့ ။” ဆိုပါတယျ။
ပရဟိတမငျးသားကွီးလညျးဖွဈ ပွညျ့သူအခဈြတျောလညျးဖွဈတဲ့ ကိုဝဠေုကြျောက မွောငျ… မွောငျ… မွောငျ ပါတဲ့ ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးကရော…. မွောငျ..မွောငျ..မွောငျ ပဲလား။Credit-aungparsay
ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဝါဆိုသင်္ကန်တွေ ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ ခန့်စည်သူ